Wholesale Home Kushongedza Natural Inonhuhwirira soya Wax Cube Inonyungudza tarts fekitori uye vagadziri | Winby
Imba Yekushongedza Natural Inonhuhwirira soya Wax Cube Inonyungudza tarts
● Yakagadzirwa kubva kune yakasikwa soya wakisi, aya maoko akadurura wakisi tarts inopa yakachena kutsva uye zviri nyore kushandisa. Wax inonyungudika inzira yakachengeteka kumakenduru echinyakare, kuti ugone kunakirwa nekunhuwirira kwayo.
● Aya machubhu ewakisi anonyungudika anozadza kamuri rako nekunhuwirira kunonakidza. Yakakwana kumakamuri ekurara, dzimba dzekugara, dzimba dzekugezera, mahofisi, uye chero kumwe kwaunoda kuzorodza mweya.
● tinobvuma kugadzirisa, iwe unogona kutitumira yako pachako dhizaini kana ako ega mavara, wen anogona kukuita iwe kutanga mese uye kugutsa zvaunoda.
Kukura: 7.5cm (Kureba) * 5.5cm (Upamhi) * 2.3cm (Kureba)
Natural yakasanganiswa wakisi cube inonyungudika mabhureki
Iyo inonyunguduka wakisi block haina tambo uye inogona kushandiswa ne heater.
Iyi wax inonyungudika yakachengeteka uye ine hushamwari, aya machubhu anonyungudika akadururwa ruoko newa wax wakisi yekutsva kwakachena.
Iyo yakisi yakisi inonyungudika inoitwa nekushandisa ese echisikigo soya wakisi uye yemhando yepamusoro yemafuta ekunhuwirira Melts akakwana kune dorms, mahofisi kana dzimba.
Kutsemuka kana clamshell wax yakanyungudika zvinozivikanwa nekuti hazvidhuri uye zviri nyore.
Iyo inonyungudika inowanzo gadzirwa mune 6 chikamu, epurasitiki clamshell muforoma.
Yese cube inenge 1/2 oz. uye ichapa kanenge maawa masere.
Unogona kusarudza munhuwi kana hwema kubva kunhuhwirira runyorwa, sa lavender, vanilla, rose, sitirobheri, ndimu, gungwa, nezvimwe.
Mashoko Natural soya wakisi
Saizi 7.5cm (Kureba) * 5.5cm (Upamhi) * 2.3cm (Kureba)
Logo/ chitaridzi Tsika sezvinodiwa nevatengi
Wax uremu 70g
Nguva yekupisa 14hours
Pashure: Yakashongedzwa chakra inonhuhwirira makenduru e soya nemakristani arimo
Zvadaro: Cotton Kenduru Wick neParafini Wax Yakavharwa
Cotton Kenduru Wick neParafini Wax Yakavharwa
Electroplated sirivheri girazi kenduru nesimbi muvharo
läpinäkyvä girazi chirongo munhuhwi kenduru